eurozone | Ibhulogi ye-FXCC
May 28, 12 • Imibono ye-3900 • Amazwana eMakethe • 1 Comment
Umbono wanamuhla we-EUR / GBP
May 25, 12 • Imibono ye-5588 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off Ngombono Wanamuhla We-EUR / GBP
Izolo, ukuhweba ku-EUR / GBP kabili kwakuvinjelwe endaweni ebanzi kakhulu yokuhweba ohlangothini oluphansi lwe-0.8000. Ukuzola okunomzimba kwenzeka njengoba nje kwakukhona ezinye izindaba ezivela e-EU nase-UK. I-euro yayingaphansi kwengcindezi encane ...
May 25, 12 • Imibono ye-979 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off kwi-EU Summits And Mini Summits
Iziqu ze-EU noma ama-mini-sumit omusha zenzeka ngokuphindaphindiwe ngoba inhlekelele yendawo ye-euro ithuthukile, njengoba izikhonzi zayo zezezimali kanye nabaholi bezama ukubhekana nezenzakalo ezihambayo ngokushesha, kuhlanganise nalabo ezimakethe zezezimali. Ngezinye izikhathi kubonakala izikhonzi ...
Amafutha Ahlulekile Ngesikhathi Sase-Asian Session
May 24, 12 • Imibono ye-1964 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off ngamafutha angcolile ngesikhathi se-Asian Session
Phakathi neseshini yokuqala yase-Asia, amanani amafutha angasetshenziswa ama-future futures angathengisa ngaphezu kwe-$ 90.45 / bbl ngenzuzo engaphezulu kwamasenti angu-40 ku-platform ye-Globex electronic. Lokhu kungase kube ukudonsa kancane ekulindeni kweChina kuzokwenza ukuthi imizamo yokukhulisa ukukhula iqhubekele ngemuva kokuthi ...
I-Unofficial EU Summit Ithatha Isiteji Isikhungo
May 23, 12 • Imibono ye-5480 • Amazwana eMakethe • 1 Comment
Abaholi bamazwe e-27 abakha i-European Union bazohlangana eBrussels ngoLwesithathu ukuze bazame ukuthola indlela yokugcina inkinga yezikweletu eYurophu ekukhuphukeni kokulawula nokukhuthaza imisebenzi nokukhula. Umhlangano wokuqala kwakufanele ube ...
May 10, 12 • Imibono ye-964 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off ku-Look Close At the Eurozone
Namuhla, ziphinde zibalwa ezimbalwa idatha eco ebalulekile kwikhalenda eYurophu. E-US, amanani angeniswa, idatha ye-March yokuhweba kanye nezimangalo ezingasebenzi zingashicilelwa. Izimangalo ezingenamsebenzi ziningi kakhulu ezimakethe ezihamba phambili. Isithombe esingcono singase sibe kancane ...
Yonke Imisebenzi Eya Kuphi?
May 3, 12 • Imibono ye-4032 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off Ngabe Imisebenzi Yonke Yayikuphi?
Ezimakethe zimangala ngalokhu ekuseni, izwe elincane laseNew Zealand lashiswa ngumbiko obonisa ukuthi ukungaqashwa kwemisebenzi ye-kiwi kwande. Izinga lokungasebenzi kwabaseNew Zealand lavuka ngokungalindelekile libe yi-6.7 ngamaphesenti ekhulwini lokuqala ngemuva kokusebenza kwabasebenzi ...